Madaxweynaha Koonfur-Galbeed oo sheegay in ay diyaar u yihiin fulinta qodobaddii kasoo baxay heshiiskii doorashada – Kalfadhi
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen, ayaa maanta aalada fogaan araga uga qeyb-galay shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Beesha Caalamka oo si rasmi ah uga furmay Magaalada Muqdisho.
Shirka waxaa ka qeyb-galay Ra”iisul Wasaaraha dalka, madaxda Dowlad Goboleedyada, Wakiilada Beesha Caalamka iyo Dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen, ayaa hadal jeedintiisa diirrada ku saaray arrimaha amniga, doorashooyinka, arrimaha siyaasada loo dhanyahay iyo hormarada degmooyinka ay ku tilaabsadeen.
Mudane Cabdicasiis Lafta-gareen, oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay hirgelinta heshiiskii Mogadishu lagu gaaray 17 Sep 2020 ee u dhaxeeyey Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Waxaa uu caddeeyay in maamulkiisa ay diyaar u yihiin fulinta qodobaddii kasoo baxay heshiiska.